Casting Aluminium kilasy ambony ambony - Mpamatsy vola amin'ny alàlan'ny alim-bolan'ny alimina aluminium
Serivisy fanariana fampiasam-bolan'ny alimina ao Shina sy ireo singa mpamatsy vola marina
Aluminium dia metaly volafotsy maivana, tsy andriamby, malefaka. Amin'ny alàlan'ny fampidirana singa kely toy ny varahina, manezioma ary zinc, ny aluminium dia azo nohamafisina. Ny toetra tsy manam-paharoa an'ny aluminium dia mamela azy hamorona saika endrika rehetra. Azo aforitra anaty takelaka matevina ho an'ny tanky mifono vy na foil manify hatao fonosana, na azo sintomina anaty tariby izy io ary vita amina boaty. Ny fanariana investissement aluminium dia iray amin'ireo teknika fampiasa matetika amin'ny famokarana aliminioma. Noho ny toetra mampiavaka azy sy ny vidin'ny tetikasa ambany, ny alim-bola amin'ny alim-bolan'ny alimina dia be mpampiasa amin'ny fiara, ny milina, ny fitsaboana, ny aerospace, ny elektronika ary ny indostria hafa.
Toetoetran'ny fitaovana vita amin'ny aliminioma (Singa fanodinana aluminium):
Ny hakitroky ny alimo dia kely dia kely, 2.7 g / cm 3 fotsiny
Ny fitaritana hafanana an'ny alimo dia avo telo heny noho ny vy
Ny velaran'ny aluminium dia tsy mora tohina
Ny aliminioma dia manana feo mitroka
Milina mora foana
Fanoherana mekanika lehibe
Mitroka sy manohitra tsara ny simika
Rano avo lenta amin'ny lanjany
Fitaovam-pitaterana hafanana sy herinaratra tsara
Ahitana taratra ny hafanana sy ny hazavana
Waterproofing, vokan'ny sakana
Toetra hita taratra
Mpamatsy famokarana aliminioma avo lenta any China
Manomboka amin'ny fiaraha-miasa ka hatramin'ny indostrialy ny vokatrao, Minghe (diecastingcompany.com) - mpamatsy serivisy famokarana fantsom-bolan'ny China Top, dia tafiditra ao amin'ny famokarana CNC Aluminium Invest Casting, sokajy kely, salantsalany, lehibe ary lehibe tokoa. Ny ivon-toeran'ny Casting Invest ho an'ny singa aluminium dia misy milina fanariana fampiasam-bola manatsara sy injeniera mahay hanome fahafaham-po ny zavatra takian'ny mpanjifanay. Na inona na inona fahasarotana amin'ny ampahany alimina, dia manatsara ny vidin'ny famokarana izahay amin'ny fanajana ny fe-potoana sy ny kalitaon'ny fanamboarana. Androany, tsapantsika fa misy karazana famokarana alimina mandrotsaka ny famokarana, manomboka amin'ny vola kely ka hatramin'ny tapitrisa ary afaka milina karazana fitaovana aluminium.
Tombony azo avy amin'ny serivisy fanodinam-bolan'ny alimina alimina:
Miaraka amin'ny fanodinana famatsiam-bola, mamorona vokatra metaly tadiaviny ny mpanamboatra. Ohatra mahazatra amin'izany ny: bokotra varavarana, fitaovam-pitsaboana, faritra misy fiara, faritra fiaramanidina, lakozia, boaty boaty, lohan'ny varingarina, boaty varingarina, fantsona, singa masinina ary maro hafa.
Rehefa mampiasa casting casting, Minghe Casting dia afaka mamorona ampahany amin'ny hatevin'ny halavany sy lanjany (eo anelanelan'ny 15 lbs, hatramin'ny 1000 lbs).
Ambany ny vidin'ny fitaovana, indrindra raha ampitahaina amin'ny fizotry ny milina azo oharina.
Ny fandefasana fampiasam-bola dia manana sehatra ambonimbony kokoa.
Ny fametrahana famatsiam-bola dia ny faharetana maharitra; mila angovo kely fotsiny izy io vao afaka mampiasa azy io, ary azonao ampiasaina indray ny fitaovana famokarana.
Famaritana ny vokatra momba ny serivisy fanodinana aluminium
Fitaovana aluminium marobe:
Fomba fanodinana alimina vita amin'ny alimina aluminium:
Fikosoham-bary vita amin'ny aliminioma CNC, fihodinana aliminioma CNC, fandavahana aluminium aluminium
Fampiharana fanariana aluminium:
Ny singa fanariana aluminium dia azo ampiharina amin'ny fiara, elektrika, miaramila, fitsaboana, fiaramanidina, famokarana herinaratra, aerospace ary injeniera indostrialy
Tombony azo avy amin'ny serivisy fanariana fampiasam-bola Minghe Aluminium
Fanary aluminium somary azo antoka
Mamolavola sy mamokatra faritra vita amin'ny aliminioma sarotra
Ny fanadihadiana momba ny tranga Minghe momba ny fananganana fampiasam-bola aluminium
Safidio ny serivisy fanariana fampiasam-bola aluminium tsara indrindra
Amin'izao fotoana izao, ny ampahany amin'ny alim-bolan'ny alimina dia alefa any Amerika, Canada, Australia, United Kingdom, Alemana, France, Sout Africa, ary firenena maro hafa manerantany. Izahay dia ISO9001-2015 voasoratra anarana ary voamarin'ny SGS ihany koa.
Custom fanariana sinoa ny serivisy dia manome filaharana maharitra sy mora vidy izay mifanaraka amin'ny fepetra arosonao amin'ny fiara, fiara, aerospace, elektronika, sakafo, fananganana, fiarovana, ranomasina ary indostria maro kokoa. Haingana handefa ny fanontanianao na handefa ny sarinao mba hahazoana teny maimaim-poana amin'ny fotoana fohy indrindra. Mifandraisa aminay na mailaka sales@hmminghe.com hijerena ny fomba ahafahan'ny vahoakanay, ny fitaovana ary ny fampitaovana mitondra kalitao tsara indrindra amin'ny vidiny tsara indrindra ho an'ny tetik'asa fanodinana aliminioma anao.